Xildhibaano xiriir u jarista Golaha Shacabka ee Aqalka Sare ku tilmaamay sharci darro – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arka in ay tahay wajib dastuuriya in ay wada shaqeeyaan Golayaasha Shacabka iyo Aqalka Sare. Arrintaas ayey Sanatar Samsam Daahir ku tilmaantay ineysan jirin cid laali karta. “Waa waajib dastuuri ah in ay wada shaqeeyaan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya” ayey Sanatar Samsam ku tiri Kalfadhi.
Sidaas waxaa la qaba Sanatar Axmed Cabdixafiid (Bulsho) oo, sida uu u sheegay Kalfadhi, aaminsan in ay qalad tahay in Aqalka Sare uu xiriirka u jaro Golaha Shacabka. Waxa uu sheegay in uu ka xun yahay arrin kaasi. “Waxaan qabaa in la ilaaliyo qodobbada dastuuriga ah ee sheegaya wada shaqaynta Labada Aqal” ayuu yiri Sanatar Bulsho.
Hase ahaatee, waxa uu Sanatarku intaas raaciyey in ay jiraan qodobbo dastuuri ah oo, sida uu sheegay, u baahan sixitaan. Qodobbadaas ayuu ku sheegay iney yihiin kuwa ka hadlaya sida ay shaqooyinka u wadaagayaan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Dastuurkan qabyada ah ayaan si fiican u qeexaynin shaqooyinka ay kala leeyihiin Labadda Aqal, haddana waa in la ilaaliyaa inta uu sheegayo dastuurka” ayuu Sanatar Bulsho ku yiri Kalfadhi.
Laakiin, Sanatar Samsam Daahir ayaa kalfadhi sheegtay in ay ku jirto Sanatarada diiddan in la weyneeyo khilaafka soo kala dhex galay Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka. “Labadda Aqal waxaa saaran waajibaad iyo wada shaqayn, loomana baahna in arrinka la sii buun-buuniyo oo guddi loo xil saaro” ayey tiri Sanatar Samsam .
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo ka tirsan Golaha Shacabka, waxa uu khilaafka Labada Gole ku tilmaamay mid iska taagan xili kasta. Waxa uu dhaliil ka dhigay in inta aan la dhisin Aqalka Sare lagu guuldareystay in shaqadiisa la qeexo. “Aqalka Sare lama yaqaan sida uu ku shaqaynayo, waxaa lagu naaneesay SANAD, haddana uma shaqeeyaan sida SANADKA Maraykanka oo kale” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Waxa uu Xildhibaanku intaas raaciyey in ay, sikastaba, aad u wanaagsan tahay in la wada shaqeeyo, si ay hawsha u socoto. Laakiin, waxa uu sheegay in, markastaba, loo baahan yahay in ay caddahay sida lagu wada shaqaynayo. “Si looga gudbo is qab-qabsiga waxay ahayd in marka hore la caddeeyo shaqadda Aqalka Sare uu waajibka u leeyahay iyo tan Golaha Shacabka” ayuu Xildhibaan Dalxa ku yiri Kalfadhi..
Khilaaf Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka waxa uu si ramiya u soo shaac-baxay markii uu Madaxweyne Farmaajo saxiixay Hindisaha Miisaaniyadda 2019-ka, iyada oo uusan aqrin, ka doodin, soona meel-marin Aqalka Sare, taas oo uu u arko waajib dastuuriya oo la hareer-mariyey. Sidaas oo kale waxay Aqalka Sare ku dhacday sanadkii tagay. Balse, nux-nuxda ah inuusan wanaagsaneen calaaqaadka Labada Gole waxy soo jirtay intuu jiray Aqalka Sare.